Xulka Cameroun - BBC News Somali
Image caption Cameroon, waa kooxdii ugu horaysay ee Africa ee gaarta wareegga 8-da koox isugu soo haraan ee koobka adduunka.
Inkastoo magacooda uu hoos uu u dhacey intii ka dambeysay sannadkii 1990kii, haddana xulka kubadda cagta (k/c) ee dalka Cameroon ee ka qeyb gelaya tartankakoobka aduunka ee sannadkan 2010ka ka dhacaya dalka South Africa, waxaa uu u muuqdaa midaan la dhayalsan Karin.
Xulka lagu naanayso "the indominable Lions" oo macnaheedu yahay "libaaxyada aan la loodin karin" waa xulka ugu sarreysa kooxaha Africa dhinaca liiska FIFA ee k/cagta, waana midka ugu badan dhinaca ka qeyb gelidda koobka k/c ee adduunka.
Xulka Cameroun 5 jeer ayay hore uga qeyb galeen koobka k/c ee aduunka, heerkii ay ka gaareena ma jirto koox African ah oo gaartay, iyagoo u gudbay wareeg 8-da koox ee koobka adduunka ee lagu qabtey dalka Talyaaniga sannadkii 1990kii, wallow xulka dalka Senegal uu gaar heerkaas oo kale ciyaarihii adduunka ee Jaban iyo Koofur Kuuriya wada martigaliyeen sannadkii 2002dii.
Ciyaatoyda jiilka cusub ee sannadka Cameroon ku mataleysa koobka k/c ee adduunka dhowaan ka furmaya dalka k/afrika ,ayaa waxay u muuqanayaan sida ay sheegayaan taageerayaasha Afrika kuwo dib u soo celin karaya xusuustii hore ee xiddigihii caanka ahaa ee Cameroun sida Roger Mooh Milla, Fransua Omam Biek, iyo Maka Nakaay.
Xulka Cameroon waxaa ay leeyihiin difaac adag sida:- Jermi Negibat, Song Wallow maalmahan dambe hoos u dhac laga dareemayey, Carlos Idruis Kamini oo Ah goolhayehooda, oo isagu lix ciyaarood is reebreebkii 2 gool oo keliya ay ka dhasheen.
Soo bixitaankooda waxaa kaalin wayn ku lahaa tababarehooda ee u dhashey Dalka faransiiska Pool leguin,oo isagu la wareegay laylinta xulka kamiruun bishii Julay sannadkii tegay ee la soo dhaafey.horena waxaa uu u soo leyliyay ,layon , Rijeriz,baris sant german,inkastoo qaraarka uu ku qaatay kabtanimada inuu ku Wareejiyo ciyaarahan samuell etto,kana qaado Rogopert Songo ay dhalisay muran Badan ,haddana gebagebadii waxaa laysku raacay taasi inay ahayd mid loo baahnaa.
Etto ayaa lagu tilmaamaa weerariyahanka ugu caansan,wallow ciyaariyahan Biyar weep laftiisu uusan sahlanayn. Qadka dhexena waxaa ugu caansan Jan makon,steavan mabiya,alexnder song oo u ciyaara kooxda arsenal ee dalka ingiriiska.
Xulka kamiruun wareegga hore ayaa lagu reebay tartankii koobka k/cagta Ee aduunka ee ka dhacey spayn sannadkii 1982kii,iyadoo marna aanan laga badin Xulka dalka kamiruun waxaa uu ciyaaray illaa iyo 17 kulan oo ku tirsanaa Wareegyada kama dambeysta ee koobka k/c ee aduunka,taasoo xul afrikan oo gaaray Iskoorkaa aan hore loo arag,badintii ay ka badiyeen arjantiin furitaankii koobkii k/c Ee aduunka ee ka dhacey dalka talyaaniga 1990kii,ayaa iyana waxay ahayd ama lagu tilmaamaa mucjisadii Ugu wayneyd ee soo mara taariikhda koobka k/cagta ee aduunka,oo arjantiin ayay
Dhulka ku jiideen iyadoo Maradona uu ka dhex muuqdey ,Cadhadii uu ka caroodey xitaa xulka kamiruun ku tilmaamay daayeero ,taasoo si aad ah ay wax uga qoreen wargeysyada sportiga ee caalamiga.
Dhaliyahooda caanka ah Rojeh Milla ayaa waxaa uu ahaa ciyaaryahankii ugu da'da waynaa ee ka qeyb gala koobka ruxruxa shabaqa xulalka Ruushka Koobkii k/c ee aduunka ee ka dhacey Mareykanka sannadkii 1994kii, wuxuuna jiray 42 sano iyo 39 maalmood, sidoo kale waxaa uu noqdey, ciyaariyahankii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika oo ka qeyb gala illaa iyo 3 jeer koobka k/cagta ee adduunka.